5 Mazano ekuti Ungashandise Sei Zvemagariro Evanhu Vatengi Ongororo | Martech Zone
Pamusika chiitiko chakaoma, kwete cheiyo chete guru mabhureki asiwo evhareji. Kunyangwe iwe uine rako rakakura bhizinesi, diki diki chitoro, kana internet chikuva, mikana yako yekukwira niche manera ishoma kunze kwekunge iwe uchitarisira zvakanaka vatengi vako.
Paunenge wakabatikana netarisiro yako 'uye mufaro wevatengi, vanokurumidza kupindura. Ivo vanokupa iwe mabhenefiti makuru ayo anowanzo kuve anosanganisira kuvimba, kuongororwa kwevatengi, uye pakupedzisira kutengesa.
Mune yanhasi posvo, ndiri kugovera zvishanu mazano ekuti ungawedzera sei midhiya midhiya vatengi kuongororwa kuti uvandudze mashandiro ebhizinesi rako.
1. Nzwisisa Zvinodiwa Nevatengi Vako
Pasina zvipupuriro zvevatengi, mhinduro dzakananga dzinenge dzakanyanya kuoma kuwana. Iwo maverengera iwe aunounganidza kuburikidza analytics software uye mhinduro zvinonyanya kubatsira uye chaizvo, asi hazvigone kufananidzwa nemhinduro yakananga iyo vateveri vako nevatengi vanogona kupa.
Fick Turban, CEO pa aussiewritings.com, vaitaridzika kunge vanofara kutipa chirevo chinonzwisisika:
Kufambira mberi kwebhizinesi kunoenderana nekugadzirisa. Panguva imwecheteyo, kugadzirisa kunoenderana nemhinduro. Paunenge iwe wawana izvi, iwe unozoona rako bhizinesi nenzira dzakasiyana uye hauzombofa wakapera nekugadzirisa mazano.
Zvinorevei kukwidziridza? Mumashoko akapusa, kugadzirisa nzira zvinoreva:
Kuvandudza iyo Ukama pakati pebhizimusi nemutengi
Kuvandudza iyo kuenderana uye mhando yezvako zvigadzirwa & masevhisi
Kugadzira yako ihwohwo hunokosha kukosha
Kumira kunze kwevanhu uye kudarika vakwikwidzi vako
Kuchinja mafeni akapusa kuita vakatendeka mamishinari
Kuteedzera kwevatengi ndiyo yako nhamba yekutanga sosi iyo inofambisa yechokwadi, isina-kurerekera zvirevo pamusoro pechako. Iyo yakawanda mhinduro (yakanaka kana yakaipa) iwe unowana zvakanyanya iwe unonzwisisa yako tarisiro vateereri. Mushure mechinguva, iwe uchaona mapatani mune ako maitiro evatengi uye ndipo paunozoziva kana ako azvino maitiro uye matanho ekuvandudza anovandudza kana kudzikisa rako bhizinesi kuita.
2. Ziva Vako Vanokwikwidza 'Eakasiyana Ekutengesa Nzvimbo
Imwe nzira inoshanda yekukwirisa yako bhizinesi mhedzisiro ndeyekuteerera kune vako vavakwikwidzi 'mabhii kutaurwa uye vatengi vatengi zvipupuriro.
Iwe unogona kuteedzera pasi yega yega kutaura kana brand kutaurwa uchishandisa makwikwi ongororo maturusi. Tsvaga chishandiso chinokodzera zvaunoda uye ushandise kuona uye "kubata" vatengi vasina mufaro avo vakaita kuyedza kutsoropodza vakwikwidzi vako.
Ipa mhinduro iri nani kumatambudziko avo uye vanobva vangochinja mativi. Unogona kuvabvunza uchishandisa meseji yakavanzika, kana kunyange zvirinani, shandisa "nhema" account kupindura zvakataurwa nevanhu vasina kugutsikana vawakatsvaga. Vatungamire vakananga kuchiratidzo chako nekusiya "isina rusarura" ongororo yemhinduro dzinogona kuunzwa neako marashi.
3. Ratidza iwo Akanaka Uchapupu paWebhusaiti Yako
Ndeipi nzira iri nani yekumisikidza magariro enhau zvipupuriro pane kuvaratidza pawebhusaiti yako? Iwe unoona, havazi vese vangangoita mutengi vanozoenda kuburikidza ako enhau midhiya mapeji, saka mazhinji acho haazosvika pakuona maonero evamwe vatengi.
Zvichienderana nekuti unoda kuvaratidza sei, unogona kushandisa yemahara skrini app kutora zvipupuriro kana iwe unogona kuzvinyora semavara uye wozviwanira iwo nzvimbo yakanaka pane yako saiti. Chero nzira, ramba uchifunga kuti 95% yevatengi vepamhepo vanogona kutenga chimwe chinhu mushure mekuverenga ongororo yakavimbika.
4. Natsiridza hukama hwehukama nevatengi vako
Heino mutemo usina kunyorwa iwe waunofanirwa kuchengeta mundangariro: gara uchipindura kune ako vatengi zvipupuriro. Zvakanaka kana zvakaipa, hazvina basa. Nekuregeredza wongororo dzausingade, urikuratidza kuti haugone kuvimbwa. Nekuregeredza izvo zvakanaka, iwe unorasikirwa nemikana yekuvandudza zvirinani kuvimba nemutengi akasiya wongororo uye iwe ucharatidza kuti yako mhando haina vatengi vayo mupfungwa.
Nokuramba uchipindura wongororo dzako dzese uye marita kutaurwa, iwe unowana ruremekedzo uye kuvimbika kwevatengi vari kungopfuura, vachitsvaga kusasarura kuongororwa.
5.Dzorera Vateveri Vakavimbika kuva maBrand Ambassadors
Kupindura zvipupuriro ndiro danho rekutanga. Kupinda mukutaurirana ndiko kwechipiri. Pese paunogashira humbowo hwemhando yepamusoro pasocial media, ipa mhinduro inobatsira (iyo vanhu vazhinji vanogona kuona) uye gadzirira podhi yakanangana nemunhu akaedza kugovera maonero avo.
Unogona kutanga nechimwe chinhu chakadai “Hei, tinotenda nenguva yamakatora kuongorora zvigadzirwa / masevhisi, uye tinoda kukuzivai zviri nani…” Haufanire kuedza zvakanyanya - kazhinji kese, mutengi wese asiya wongororo yakanaka pamapeji ako eruzhinji ichavhurirwa zvimwe. ”
Chii chaunofanira kukumbira? Zvakanaka, kutanga, unogona kukurudzira muongorori wako kuti aongorore achifukidza ruzivo rwavakawana newebsite yako, zvigadzirwa zvako, rutsigiro rwevatengi vako, zvichingodaro.
Kana, kunyangwe zvirinani, iwe unogona kuvapa iwo mukana wekuva mumwe wako brand ambassadors. Izvi zvinoreva kuti ivo vanogashira mahara kana zvakaderedzwa zvigadzirwa, muripo wemari, kana chero chaunotsvaga chakakodzera, zvese mukutsinhana neramangwana rutsigiro. Basa revamiriri vemakambani kusimudzira zita rebhizinesi kwese kwavanoenda, nekushandisa ma hashtag, kugovana zvirimo, kufarira zvinyorwa uye nekukurudzira shamwari nevanozivikanwa kuti vatarise zvigadzirwa zvechigadzirwa.
Pasina nharaunda yakabatanidzwa inoda kuongorora mhando yako, zvigadzirwa, nemasevhisi, kuratidza masimba mune iyo niche richava basa rakaoma. Zvemagariro enhau network igoridhe kune avo vanoziva kuishandisa nemazvo. Bata vateveri vako zvirinani nekuvapa hwakawanda mhando, kukosha, uye kutarisirwa. Nekufamba kwenguva, mukufamba kwenguva, hukama hwako hwakakudziridzwa hwevatengi hunogadzira zvinoshamisa izvo zvinoshandura kumeso kwebhizinesi rako.
Tags: brand ambassadorsmakwikwikuongorora kwevatengivatengi zvipupuriroFick TurbanReviewsmagariro enhau
Olivia anofarira blogger uyo anonyora pamusoro wenyaya dzekushambadzira kwedigital, basa, uye kuzvisimudzira. Iye anogara achiedza kudzidza chimwe chinhu chitsva uye kugovana chiitiko ichi pane akasiyana mawebhusaiti.